Bafuna kulungiswe ipayipi elivuzayo | News24
Bafuna kulungiswe ipayipi elivuzayo
ISITHOMBE: lethiwe makhanyaSelize labekwa amatshe ipayipi lamanzi elivuzayo eSobantu.
AMALUNGA omphakathi waseSobantu athi akhathazekile ngepayipi lamanzi elivuzayo esekuphele isinto lingalungiswa ngemuva kokuba kubikiwe kamasipala.
Leli payipi liqhume ngesonto eledlule kodwa kuze kube imanje alikakalungiswa kanti amanzi wona ayaxhaxhaza ubusuku nemini.
Ngokuthola kwe-Echo leli payipi eliseduzane nasehholo lomphakathi kanye nasehhovisini lekhansela, lafakwa umasipala eminyakeni engaphezu kwemihlanu eyedlule ukuthi abantu bathole amanzi.
Ngokusho komphakathi wakulendawo, ngesikhathi kufakwa lelipayipi alizange lisagqitshwa, labe selishiywa lihamba ngaphezulu ngoba umasipala wawuthembise ukuthi into yesikhashana basazobuya bazolilungisa kahle kodwa kuze kube imanje lisahamba ngaphezulu. Ngesikhathi i-Echo ihambele le ndawo ngoLwesibili amanzi abexhaxhaza kanti eduze kwe payipi sekuze kwaba khona idamu okukhombisa ukuthi amanzi sekunesikhathi eside aqala ukuvuza. Amalunga omphakathi asebeke amatshe amakhulu phezu kwalapho kuqhume khona ipayipi ukuzama ukuvimba ukuthi amanzi angaxhaxhazi kakhulu.
Amalunga omphakathi akhulume ne-Echo kule ndawo athe akhathazekile kakhulu ngaloku ngoba maningi kabi amanzi asemoshekile.
“Kunezindawo eziningi kabi endaweni yaseMsunduzi ezingenawo amanzi esekuphele isikhathi eside futhi zingenawo kodwa umasipala ukwazi ukuthi uhlale isikhathi eside kangaka ungalungisi ipayipi elivuzayo .
“Lamanzi amangaka alahlekayo ubani okuzobe sekuthiwa akawakhokhele ngoba kuzobe sekufakwa lesi sikweletu kuthiwa asikhokhe ekubeni kuyibona abahluleke ukulungisa ipayipi ngesikhathi,” kusho elinye ilunga lomphakathi elakhelene naleli payipi elivuzayo. Lomphakathi uthi ufuna ukuthi umasipala ulungise lelipayipi bese uyaligqiba ukuze kungeke kuze kube lula ukuthi lilimale uma ngabe lugqitshiwe. Okhulumela umasipala uMsunduzi uNks Thobeka Mafumbatha akayiphendulanga imibuzo athunyelelwe yona kwaze kwashaya isikhathi sokushicilela.